တရုတ်ပြည်နယ်တစ်ခုက လူဦးရေ သန်း ၈၀ မှာ ဆင်းရဲနွမ်းပါးသူ ၁၇ ဦးသာရှိဟု ထုတ်ပြန်
မယုံကြည်သူတွေက အွန်လိုင်းမှာ မေးခွန်းထုတ်နေကြပါတယ်။
တရုတ်နိုင်ငံ ပြည်နယ်တစ်ခုက ၎င်းတို့ရဲ့ လူဦးရေ သန်း ၈၀ ကျော်အနက် ဆင်းရနွမ်းပါးသူ ၁၇ ဦးမျှသာရှိတယ်လို့ ထုတ်ပြန်ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
(Jiangsu ပြည်နယ် Nanjing မြို့တော်မြင်ကွင်းတစ်ခု) (Photo: VCG/Chin‌a Daily)
တရုတ်အရှေ့အလယ်ပိုင်းမှ Jiangsu ပြည်နယ်က ပြည်နယ်အတွင်း အောင်မြင်တဲ့ စည်းရုံးလှုံ့ဆော်လှုပ်ရှားမှု ဆောင်ရွက်ခဲ့ပြီးနောက်ပိုင်း ဆင်းရဲနွမ်းပါးသူအဖြစ် သတ်မှတ်ထားတဲ့ တစ်နှစ်ဝင်ငွေ ယွမ် ၆,၀၀၀ (မြန်မာကျပ်ငွေ ၁၃ သိန်းနီးပါး) အောက် လျော့နည်းရရှိသူ လက်တစ်ဆုပ်စာမျှသာ ရှိတော့တယ်လို့ ဆိုပါတယ်။
ကမ်းရိုးတန်းဒေသမှာရှိတဲ့ Jiangsu ပြည်နယ်ဟာ တရုတ်နိုင်ငံမှာ ချမ်းသာကြွယ်ဝမှု၊ ပညာရေး၊ နည်းပညာနဲ့ ခရီးသွားလုပ်ငန်းကဏ္ဍတွေမှာ ရှေ့ဆုံးမှ ဦးဆောင်နေတဲ့ ပြည်နယ်တစ်ခုဖြစ်ပြီး Guangdong ပြည်နယ်ပြီးပါက တရုတ်မှာ ဒုတိယမြောက် စီးပွားရေးထုတ်ကုန် အများဆုံးလို့ဆိုပါတယ်။ သို့သော် လတ်တလော ထုတ်ပြန်လိုက်တဲ့ ဆင်းရဲနွမ်းပါးသူဦးရေ ကိန်းဂဏန်းတွေကိုတော့ အွန်လိုင်းမှာ မေးခွန်းထုတ်မှုတွေ ထွက်ပေါ်နေပါတယ်။
"ဒါကို မယုံပါဘူး၊ အဲဒီပြည်နယ်မှာ အလုပ်လက်မဲ့ မရှိတော့ဘူးလား? တောင်းရမ်းသူတွေ မရှိတော့ဘူးလား?" လို့ အွန်လိုင်းအသုံးပြုသူတစ်ဦးက မွေးခွန်းထုတ်ထားပါတယ်။ ဆင်းရဲမွဲတေမှု တိုက်ဖျက်ရေးဟာ တရုတ်အစိုးရရဲ့ ရည်မှန်းချက်တွေအနက် တစ်ခုအပါအဝင် ဖြစ်ပါတယ်။ ၂၀၁၉ ခုနှစ် နှစ်ကုန်ပိုင်းမှာ ထုတ်ပြန်ထားတဲ့ နောက်ဆုံးအချက်အလက်တွေအရ Jiangsu ပြည်နယ်က သတ်မှတ်ထားတဲ့ ဆင်းရဲမွဲတေမှု အခြေအနေကနေ လူဦးရေ ၂.၅၄ သန်းကို လွတ်မြောက်စေခဲ့ကြောင်းလည်း သိရပါတယ်။
ယခု ထုတ်ပြန်မှုဟာ Jiangsu ပြည်နယ်က ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ်အတွင်း ဆင်းရဲမွဲတေမှု လုံးဝ မရှိစေရန် ရည်မှန်းထားကြောင်း ကြေညာထားခဲ့မှုနဲ့ ဆက်စပ်နေပါတယ်။ ပြည်နယ်အာဏာပိုင်တွေက တရုတ်မီဒီယာကို ပြောကြားမှုအရ ၎င်းတို့ပြည်နယ်အတွင်း ဆင်းရဲနွမ်းပါးနေဆဲဖြစ်သူ ၁၇ ဦးဟာ အလုပ်လုပ်နိုင်သူတွေ ဖြစ်ကြတယ်လို့လည်း သိရပါတယ်။
တရုတ်နိုင်ငံရဲ့ စီးပွားရေးတိုးတက်မှုနှုန်းဟာ နှေးကွေးသွားခဲ့ပေမဲ့လည်း တစ်နှစ်လျှင် ၆ ရာခိုင်နှုန်းဝန်းကျင် တိုးတက်နေဆဲ ဖြစ်ပါတယ်။ နိုင်ငံဟာ ပိုမိုချမ်းသာကြွယ်ဝလာတာ မှန်ပေမဲ့လည်း လတ်တလော ထွက်ပေါ်လာတဲ့ Jiangsu ပြည်နယ်ရဲ့ မယုံနိုင်လောက်တဲ့အထိ ဆင်းရဲမွဲတေမှုတိုက်ဖျက်ရေး အောင်မြင်မှုအပေါ် အွန်လိုင်းမှာ မေးခွန်းထုတ်နေကြပါတယ်။